Gacan-jabis for Windows: Sida loo isticmaalo gacan-jabis on Windows
> Resource > Windows > gacan-jabis for Windows: Isticmaal gacan-jabis in Windows
Gacan-jabis waa multiplatform ah iyo il furan video transcoder (DVD video Converter), ayaa diyaar u ah MacOS X, Linux iyo Windows, oo gebi ahaanba bilaash ah. Iyada oo gacan-jabis, aad transcode kartaa DVD kasta, video in MP4 (M4V) ama qaab file MKV la MPEG-4, H.264, ama Theora encoded.
Hoos waxaa ku tutorial gacan-jabis ah si ay u isticmaalaan gacan-jabis for Windows: Window 7, Vista, XP iyo 2000 waxaa taageera.
Waxaad intaa ku rakibi laga yaabaa in ay 3.5 Microsoft .net Framework SP1 . Hana la soco in tani waa in lagu dhejiyaa xitaa haddii .net version 4 waxaa lagu rakibay, sababtoo ah version 4 ma aha gadaal socon.
Gacan-jabis Tutorial Tallaabo 1: Dooro ah DVD / Video Source
Wax First hore, dejisan iyo rakibi gacan-jabis for Windows. Marka aan bilowno gacan-jabis ah, riix "Source" button dusheeda, aad heshay saddex doorasho:
Video File : Isticmaal Doorashadan si loogu badalo file video ah, tusaale ahaan, ka wmv in MKV.
Folder : Isticmaal Doorashadan in ay doortaan DVD / Blu-ray Video_ts gal ah ku saabsan disk adag.
DVD Drive Option : Kaliya heli karaa haddii gacan-jabis ogaadaa movie DVD ee drive ah.
Dooro il iyo mar laga keeno, aad heshay liiska horyaal ee isha, ka dibna dooro mid ka mid ah aad dooneyso in aad encode. Movie ugu weyn ee sida caadiga ah muddada ugu dheer.
Gacan-jabis Tutorial Talaabada 2: ka dhig Settings Output
Waxa ugu horeeya waa in ay doortaan caga wax soo saarka. Si fudud u riix "Browse" button iyo dooran gal ah ku saabsan disk adag.
Marka labaad, dooran horena a ka mid ah liiska horena on xaq. Xitaa aad rabto in aad u astaysto-beegyada uu u, waxa lagugula talinayaa in aad doorato horena u dhow oo bilaabi beddelo halkaas ka. Sida ku saabsan in presets ah, "caadi ah" iyo "Profile High" ku wanaagsan yihiin in daawashada on your computer ama TV. "Universal" Waxaa laga yaabaa in aad fiican tahay kombuyuutarrada gacanta aad.
Gacan-jabis Tutorial Tallaabo 3: Ka billow diinta
Waa wakhti ay ku dhufo "Start" badhanka si ay u bilaabaan video diinta DVD ama kaliya diinta video. Haddii aad qabto videos badan si loogu badalo, guji "Add to safka" button saf kuwaas oo hawl ka "Encode safka" wada hadal bilaabaan.
Gacan-jabis for Windows Talooyin:
1.Handbrake ma at diinta jooga oo dhan videos gadan karaa Lugood ama laga helay DVD ama Blu-Ray cajalladaha. Haddii aad ku guul darreysato in ay iyaga loogu badalo, Video Converter labada hawlahan si fudud u samayn heli karto.
Mar Deji 2.Beerta noqon doontaa dhowr daqiiqo illaa saacado badan ku xiran tahay dhererka video ah, hardware ee aad PC iyo goobaha in aad gacan-jabis.